राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालको राजनीतिमा पूँजीपति वर्ग र कम्युनिष्टहरूबीच वाक्युद्ध या वैचारिक युद्ध स्वाभाविक हो। पूँजीपति वर्गको विरोध गर्नु हरेक कम्युनिष्ट पार्टीको जिम्मेवारी हो। तर नेपालका आफूलाई ठूला भनिने कम्युनिष्टहरू पूँजीपति वर्गसँगै साठगाँठ गर्छन्, मिलिजुली सरकार गठन गर्छन् र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दलसमेत पूँजीपति वर्गले ल्याएको विधेयक, नीति, नियम पारित गर्छन्। एमालेको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र एमालेको सरकार ढाल्न नेकासँग मिल्न गएको इतिहास सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। माओवादी केन्द्र सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी भएको भए नेकासँग मिल्दैनथ्यो। यो सबै सत्ता स्वार्थको निम्ति गरिएको खेल हो। अवसरवादी राजनीति हो। अवसरवादी राजनीति कम्युनिष्ट पार्टीको विपरीत विचार हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँगको पार्टी एकताको प्रयास समाजवादी क्रान्तिको लागि भएको उद्घोष गरे। उनले आफ्नो जीवनकालमा समाजवादी क्रान्ति भएको हेर्न चाहेको बताए। समाजवादी क्रान्ति सरकारले गर्दैन, सरकारमा बसेर हुँदैन। समाजवादी क्रान्ति एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि मात्र चाहिने कस्तो कम्युनिष्ट पार्टी ! निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कम्युनिष्ट पक्षधर जनताको मत पाउन समाजवादी क्रान्तिको सपना बाँड्ने दाहालले यसअघि किन समाजवादी बन्दोबस्तबारे जनतालाई खुराक दिंदैनन्?
समाजवादी क्रान्ति कुनै दलको एकताले हुने होइन। समाजवादी क्रान्ति गर्न पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, जनमत तयार गर्नुपर्छ, जनमत तयार गर्न जनतामाझ कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचार फिजाउनुपर्छ। समाजवादी क्रान्तिको बाटो तयार गर्न माओवादी केन्द्रले क्रम भङ्ग गरेर पार्टीको विधान फेर्नुपर्छ, विधान फेरेर कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार राजनीति गर्नुपर्छ। पार्टी एकता भएसँगै समाजवादी क्रान्ति तयार हुने होइन। एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिष्टको सपना बाँडेर जनताको मत लिंदै छन्। समाजवादी क्रान्तिको कुरा उठाएर कम्युनिष्ट पक्षधर जनताको मत लिन अघि सर्दैछन्। विगतको निर्वाचनमा पनि यस्तै झूट र भ्रमको खेती गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले मत लिए।
समाजवादी क्रान्ति कसैले चाहँदैमा हुने होइन। समाजवादी क्रान्ति गर्न के एमाले र माओवादी केन्द्र अघि सर्छ? सरकार छोडेर वर्गसङ्घर्षको बाटो रोज्छ? वर्गसङ्घर्षको बाटो रोज्दैन या सरकारमै सधैं टाँसिरहन्छ भने कसरी नेपालमा समाजवादी क्रान्ति हुन्छ ?